3 Zvikonzero Mashina Shanduro Haisi Pedyo neDudziro Yemunhu | Martech Zone
Chipiri, July 21, 2015 Muvhuro, July 20, 2015 Douglas Karr
Makore apfuura, ndinorangarira ese masaiti aisanganisira iwo akashata otomatiki ekushandura mabhatani. Iwe unodzvanya bhatani pane isiri-yeChirungu saiti uye yaisatombo kuverengeka. Chiyedzo chakanakisa chaive chekushandura ndima kubva kuChirungu kuenda kune mumwe mutauro… uyezve kudzokera kuChirungu kuti uone kuti mhedzisiro yacho yanga yakasiyana papi.
Nyaya iripo, kana ndikadudzira iyo yekutanga ndima kubva kuChirungu kuenda kuSpanish uye kudzoka zvakare uchishandisa Shandurudzo google, hezvino mhedzisiro yacho:
Makore apfuura, ini ndinorangarira ese mabhatani masaiti saiti kusanganisira anotyisa mushanduro yemuchina. Iwe unodzvanya bhatani pane imwe saiti kunze kweChirungu uye yanga isinganzwisisike. Humbowo hwakanakisa hwaive hwekushandura ndima kubva kuChirungu kuenda kune mumwe mutauro… uyezve ndokudzokera kuChirungu kuti uone kuti mhedzisiro yacho yanga yakasiyana papi.
Mune imwe nhanho yakapusa, iwe unogona kuona iyo chunk yeiyo chaiyo uye yakatwasuka verbiage iyo yakarasika. Kukanganisa kwe shanduro yemuchina zvakafanana nezvavakave kwemakore. Shanduro yemuchina haina chinyorwa, kugona kukurira kusaziva, uye kushayikwa kwe ruzivo. The Machine haina kudzidza ne20+ makore mune yakatarwa munda kana musoro wenyaya wakashanduka nekufamba kwenguva. Mashoko haangoshandurirwe, anodudzirwa zvichienderana nemusoro wenyaya uye neruzivo rwemunyori nemuverengi.
Ehezve, muturikiri wemunhu haakwanise muhomwe yako, uye vangangogara vasingakwanise kuperekedza newe kune chaiyo chaiyo yekuresitorendi Thai kana mhiri kwemakungwa zororo, saka izvi ndizvo zvatinokurudzira: Paunenge uchida mhedzisiro, uye ivo havapi ' t inofanirwa kuve yakakwana, zvakanaka kushandisa Google Dudziro. Kune chero mhando yemabhizinesi kana ezvokutengeserana magwaro, kana chero chinhu chinofanirwa kuve chakanyatso, zvakanaka kunamatira nevashanduri vevanhu.
Heano musoro-kune-musoro bvunzo kubva Verbalink iyo inopa zvimwe zvakawanikwa uye maitiro akanakisa e Shanduro yeMuchina maringe neDudziro Yemunhu.
Tags: google translatedudziro yegooglekushandurwa kwevanhushanduro yemuchinaverbalink
Hausi Kutora Kubatsira kweGlobal Market Market
Mar 7, 2016 pa 8: 14 AM
Zvinonakidza uye zvinosetsa !!!! Ndofunga muchina haufe wakarova munhu!!